ဥပမာ, သွားရောက်လည်ပတ်၌သင်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားနိုင်ပါသည် ပဲရစ်စ်နှင့်အမ်စတာဒမ်. လမ်းကြောင်း Check, သငျတို့သဘရပ်ဆဲလ်နှစ်ခုအကြားတည်ရှိနေတဲ့မြို့ကြောင်းကိုတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်! ရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့် ချိတ်ဆက်မြို့ကြီးများ, နှစ်ခုအိပ်မက်နေရာများအကြားဖြစ်ကြောင်းသို့မဟုတ်သူတွေကို, သင်သည်သင်၏ခေါပိုပေါက်ကွဲသံကြီးရနိုင်.
gastronomic ပျော်မွေ့ ဥရောပမှာနေရာတိုင်းများမှာ. သင်တို့မူကားတစ်ဦးဘတ်ဂျက်အပေါ်ဥရောပမှာခရီးသွားနေလျှင်, လုပ်ဖို့စမတ်ရာစျေးကြီးခရီးသွားဧည့်သောနေရာများမှာအစာစားခြင်းမှရှောင်ရှားရန်ဖြစ်ပါသည်. စားသောက်ဆိုင်ဥပဒေကြမ်းများကိုသင်၏အစာဘတ်ဂျက်ကိုချိုးဖျက်မခံပါနဲ့.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/traveling-europe-budget/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#ဘတ်ဂျက် #traveleurope budgettravel cheaptravel savemoney